ဘယ်လ်ဂျီယံလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (BVBA) ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကဘယ်လ်ဂျီယံလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (BVBA) တစ်ဦးကိုဗြိတိန်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) နှင့်ဆင်တူသည်။ အဆိုပါရှယ်ယာရှင်များ liabilities သူတို့ပေးသွင်းပြီးသောသူတို့၏ဝေစုမြို့တော်ရဲ့တန်ဖိုးကိုကန့်သတ်ထားပါသည်။ တစ်ဦး BVBA များအတွက်တရားဝင်အမည်အား "Besloten Vennootschap Beperkte Aansprakelijkheid တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး" ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ BVBA လုံးဝကြောင့်နိုင်ငံခြားသားများအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းရန်လူကြိုက်အများဆုံးဘယ်လ်ဂျီယံကုမ္ပဏီအောင်နိုင်ငံခြားသားတွေကပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံဂျာမဏီ, နယ်သာလန်, ပြင်သစ်, လူဇင်ဘတ်, နှင့်မြောက်ပင်လယ်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်အနောက်တိုင်းဥရောပတိုက်တွင်တည်ရှိသောအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကဧကရာဇ်ကအုပ်ချုပ်သည်ကို ထောက်. တရားဝင်အမည်အား "ဘယ်လ်ဂျီယံ၏နိုင်ငံတော်" ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လ်ဂျီယံနှစ်ခုအဓိကဘာသာစကားအုပ်စုများရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Flemish အသိုင်းအဝိုင်းစုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့ 59% ဝန်းကျင်ပါဝင်သည်နိုင်ငံသားများစကားပြောဒတျချြပါဝင်သည်ဟု။ ထိုအခါလူဦးရေရဲ့ 41% ပါဝင်သောပြင်သစ်စကားပြောသည့် Walloon အဘိဓါန်လူဦးရေလည်းမရှိ။ ဂျာမနီနှင့်အတူနယ်စပ်အနီးတွင်နေထိုင်သောသေးငယ်တဲ့ဂျာမန်စကားပြောတဲ့လူဦးရေလည်းရှိပါသည်။
၎င်း၏နိုင်ငံရေးစနစ်ကတစ်ဦး "ဖက်ဒရယ်ပါလီမန်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်" အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။ တိုင်းပြည်တစ်ဧကရာဇ်ကအုပ်ချုပ်ပေမယ့်နှစ်ခုအိမ်များနှင့်ဝန်ကြီးချုပ်ပါဝင်သည်ဟုတစ်ဦးရွေးချယ်တင်မြှောက်ဖက်ဒရယ်ပါလီမန်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လ်ဂျီယံဥရောပသမဂ္ဂ၏ခြောက်လမူရင်းတည်ထောင်သူအဖွဲ့ဝင် (အီးယူ) ၏တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လ်ဂျီယံလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (BVBA) အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကဘယ်လ်ဂျီယံလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (BVBA) အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုကမ်းလှမ်း:
•နိုင်ငံခြားသားအားလုံးရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်နိုင်သည် BVBA ရဲ့ရှယ်ယာလုံးဝနိုင်ငံခြားသားများကပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။
•တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များနှင့်တစ်ခုမှာဒါရိုက်တာ: အဆိုပါဝါးရှယ်ယာရှင်ဟာ BVBA ကိုထိန်းချုပ်ဖို့သာဒါရိုက်တာအဖြစ်သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူ့ကိုယ်သူခန့်အပ်နိုင်ပါ။
•အနိမျ့မြို့တော်: အဆိုပါလိုအပ်နိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်ထည့်သွင်းသည့်အခါတက် paid သုံးပုံနှစ်ပုံနှင့်အတူ 18,500 ယူရိုဖြစ်ပါတယ်။
•အီးယူအဖွဲ့ဝင်: ဘယ်လ်ဂျီယံဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် (အီးယူ) ကပိုအခွင့်အလမ်းများကိုဥရောပမှတဆင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သွားရန်ခွင့်ပြု။
ဘယ်လ်ဂျီယံလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (BVBA) အမည်
ကုမ္ပဏီအမည်များကိုဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများ၏အခြားအမည်များကိုပုံနဲ့တူတဲ့ထူးခြားတဲ့နှင့်မဖြစ်ရပါမည်။ ရရှိနိုင်သည့်ကုမ္ပဏီအမည်အားစစ်ဆေးမှုများကြိုတင်အသစ်တစ်ခုကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်လျှောက်ထားဖို့ဖျော်ဖြေနိုင်ပါသည်။ အဆိုပြုထားသောကုမ္ပဏီအမည်များအထိ 10 နေ့ရက်ကာလအဘို့သိုထားနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီအမည်ကို၎င်း၏အမည်ကို၏အဆုံးမှာအတိုကောက် "BVBA" တို့ပါဝင်သည်ရမည်ဖြစ်သည်။
•ကနဦး parameter သည် setting များကိုအတူတစ်စာရင်းကိုင်စနစ်ကဖန်တီး;
•စာရင်းကိုင်စာရွက်စာတမ်းများ Entry နဲ့ခွဲခြား;
•ယင်းမှတ်ပုံတင်မည်ရုံးဥပဒေရေးရာ Persons ၎င်း၏မှတ်ပုံတင်မည်အတွက်ကုမ္ပဏီသစ်တို့ပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါကုမ္ပဏီသစ်အဘို့ထူးခြားတဲ့မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ထုတ်ဝေထားသည်။
•ထူးခြားတဲ့ VAT နံပါတ်ရရှိရန်ဒေသခံ VAT ကိုအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူ Register ။
•ထိုအခါကုမ္ပဏီထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ပြီးနောက်3လအတွင်းလူမှုအာမခံရံပုံငွေအဖွဲ့နှင့်အတူက register လုပ်သွား။
တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်တစ်နိမ့်ဆုံးတစ်ဦး BVBA ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ရှယ်ယာရှင်များဘယ်နေရာမှာမဆိုနေထိုင်မည်သည့်နိုင်ငံသား၏နိုင်ပါတယ်။ ရှယ်ယာရှင်များတစ်ဦးချင်းသို့မဟုတ်တစ်ကော်ပိုရေးရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ရှယ်ယာရှင်များ၏နံပါတ်မရှိအများဆုံးန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ပုံစံအတွက်ထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။ ရှယ်ယာလွှဲပြောင်းကန့်သတ်ကြသည်။ အဆိုပါမှတ်ပုံတင်ရုံးကို "ရှယ်ယာရှင်များမှာမှတ်ပုံတင်မည်" ထိန်းသိမ်းရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ခုမှာဒါရိုက်တာ BVBA စီမံခန့်ခွဲခန့်အပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးကတစ်ဦးတည်းသောရှယ်ယာရှင်ကုမ္ပဏီ၏ပြီးပြည့်စုံသောထိန်းချုပ်မှုများအတွက်သာဒါရိုက်တာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရပေမည်။ ဒါရိုက်တာဘယ်နေရာမှာမဆိုနေထိုင်မည်သည့်တိုင်းပြည်နိုင်ငံသားများရှိနိုင်ပါသည်။ ဒေသခံတစ်ဦးညွှန်ကြားရေးမှူးခန့်အပ်မလိုအပ်ပါ။
ဘယ်လ်ဂျီယံကုမ္ပဏီများမှဒေသခံတစ်ဦးရုံးလိပ်စာဒါမှဥပဒေရေးရာစာတမ်းများတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပြီးဥပဒေဆိုင်ရာသတိပေးချက်များလက်ခံရရှိရှိရမည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, အ BVBA တက် setting ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏မှတ်ပုံတင်ရုံးအဖြစ်သုံးစွဲဖို့အတွက် BVBA ၎င်း၏ရုံးခန်းလိပ်စာပေးထားပါတယ်။
အရေးပါသောအချက်မှတ်ပုံတင်ရုံး၏တည်နေရာတရားဝင်တဦးတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်သည့်ဘာသာစကားဆုံးဖြတ်သည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ရုံးဖလန်းဒါးစ်တွင်အခြေစိုက်သည်ဆိုပါကတရားဝင်ဘာသာစကားဒတျချြဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘရပ်ဆဲလ်မှာရှိတဲ့လျှင်, ရုံးသုံးဘာသာစကားဒတျချြသို့မဟုတ်ပွငျသစျဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Walloon အဘိဓါန်ဒေသတွင်ဆိုလျှင်, တရားဝင်ဘာသာစကားပွငျသစျဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်သောနိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်ရှိလျှင်ထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာသုံးပုံနှစ်ပုံအထိပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်ဘယ်မှာ 18,550 ယူရိုဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ခုရှယ်ယာရှင်များရှိပါတယ် အကယ်. တစျဦးစီကြိုတင်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းမှနိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်၏သုံးပုံတစ်ပုံပေးဆောင်ရပါမည်။
လောလောဆယ်အထွေထွေကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကိုနီးပါး 34% ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်တစ်ဦး (လျှောစကေး) နိမ့်အခွန်နှုန်းကိုတစ်ဦးချင်းရှယ်ယာထက်ပို 50% ကိုပိုင်ဆိုင်ဘယ်မှာကုမ္ပဏီများသည်သက်ဆိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာမြို့တော်အပေါ်သို့ မူတည်. အခွန်နှုန်းကို% 24 မှ 27% ဆင်းလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်: အမေရိကန်အခွန်ထမ်း IRS ကိုအားလုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအခွန်မှဘာသာရပ်အားလုံးသည်အခြားသူများကိုသူတို့၏အစိုးရများအားလုံးကိုဝင်ငွေထုတ်ဖော်ရပေမည်။
အစိုးရနှင့်နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာရေးကြေညာချက်ဖြည့်စွက်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းနှစ်ကုန်ကနေ7လအတွင်းမဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးစာရင်းစစ်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါဘဏ္ဍာရေးကြေညာချက်နှစ်ပတ်လည်ယေဘုယျအစည်းအဝေးတွင်တင်ပြအတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။
"အသေးစား" အဖြစ်ခွဲခြားကုမ္ပဏီများအနေနဲ့စာရင်းစစ်၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုမလိုအပ်ဘဲတစ်ဦးရိုးရှင်းသောဘဏ္ဍာရေးကြေညာချက် file နိုင်ပါတယ်။
နှစ်စဉ်ယေဘုယျရှယ်ယာရှင်များ '' အစည်းအဝေးကျင်းပရပါမည်။
ဒါဟာ file မှနှစ်ပတ်အထိကြာနိုင်ပြီးတစ်ဦး BVBA ဖွဲ့စည်းရန်အတည်ပြုရမည်။
နိုင်ငံခြားသားများအားဖြင့်အားလုံးရှယ်ယာပြည့်စုံပိုင်ဆိုင်မှု, ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှု, အနိမ့်နိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်, အီးယူအဖွဲ့ဝင်များနှင့်တစ်ခုတည်းသောညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်နိုင်သူတဦးတည်းရှယ်ယာရှင်တစ်ဘယ်လ်ဂျီယံလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (BVBA) အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိပါတယ်။